Guuleed oo Shirkaddaha Isgaarsiinta uga digay in ay fuliyaan amarka Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Guuleed oo Shirkaddaha Isgaarsiinta uga digay in ay fuliyaan amarka Al-Shabaab
Muqdisho (KON) - Sii hayaha xilka Wasiirka Arrimaha Gudaha, C/kariin Xuseen Gulleed ayaa ka hadlay go'aankii Al-Shabaab ay ku Mamnuucday Internetka, Wasiirka ayaa uga digay shirkadaha bixiya adeegyadan inay la shaqeeyaan Al-Shabaab oo ay amarkaas fuliyaan.
Guuleed ayaa yiri “Dowladda Soomaaliya waxey sida ugu adag u cambaareyneysaa falkan oo tusineysa sida kooxaha argagixisada ah ay argagax ugu ridayaan shacabka oo ay ka hor istaagayaan isticmaalka Internetka. Dastuurkeenna ayaa qoraya xorriyadda hadalka ay lama taabtaan tahay, oo shacabku ay xaq u leeyihiin in ay macluumaadka iyo wararka ku helaan iyadoon la cabsi gelineynin.”
“Al-Shabaab waxaa laga qabsaday magaalooyinka intooda badan waxeyna ku soo urureen inay hanjabaado iyo argagax geliyaan shacabka oo ay hadda rabaan inay ka mamnuucaan internetka. Al-Shabaab haddey doonayaan inay falal dambiyo caalami ah ay ka fuliyaan dalka, dowladdu waxey leedahay mala aqbali karo in kooxaha argagaxisada ay fursad ka helaan ay dalka gudihiisa ku fuliyaan danbiyo caalami ah. Sidaas daraadeed, sida ugu adag ayaan uga soo horjeednaa falkan guracan, wararka noocan ahna waxey nagu sii dhiirigelineysaa inaan xoojinno dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisada ah.”
Wasiirka ayaa sheegay in shacabku ay u isticmaalaan internet-ka inay wax ka bartaan, isla markaana ay kula xiriiraan eheladooda caalamka kala jooga iyo inay akhbaarta caalamka ka helaan. Ma aqbali karno in shacabkayaga laga joojiyo internet-ka oo muhiim u ah.
Wasiirka ayaa yiri “Dowladda Soomaaliya waxey la shaqeyndoontaa dhammaan shirkadaha Isgaarsiinta si loo hubiyo inay adeegyada internetka iyo howlaha isgaarsiinta ay gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed. Shirkadaha Isgaarsiinta waxaan uga digeynaa inay la shaqeeyaan kooxaha argagaxisada ah oo ay awaamiirtooda dhageystaan. “
Al-shabaab ayaa dhawaan go’aan ay soo saartay ku sheegtay inay adeegga Internet-ka ee laga isticmaalo taleefoonnada iyo Computerrada ah ay ka joojinayso deegaannada ay ka taliso, iyadoo muddo 15 casho ah ah qabatay shirkadaha adeegyadan.
Keydmedia Online - Xafiisak Muqdisho // Warsaxaafadeed